I-GrexIt: Indawo yokuGcina ulwazi kwi-imeyile zikaGoogle zikaGoogle | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Epreli 8, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
I-Grexit yisoftware njengenkonzo yesicelo eyakhelweyo Izinhlelo zeGoogle evumela iinkampani ukuba zakhe indawo yokugcina ulwazi. I-imeyile iseseyona ndlela iphambili yonxibelelwano ngewebhu… kwaye itoni yolwazi lwenkampani igcinwa kwimiyalezo ethunyelwayo neyamkelweyo kubathengisi, abathengi kunye nethemba.
I-Grexit ibonelela ngezi zinto zilandelayo:
Ukwabiwa kwe-imeyile ekwabelwana ngayo Isalathiso ekwabelwana ngaso, esinokukhangelwa kwii-imeyile ekwabelwana ngazo.
Iilebhile ekwabelwana ngazo kwi-Gmail -Uhlelo lokusebenza lubonelela ngokudityaniswa okulula kunye nomxhasi we-imeyile kaGoogle zokusebenza.
Umdibaniso weeapps zikaGoogle - Register kwaye udibanise ngokuthe ngqo kwiiGoogle Apps.
Imigaqo yokulanda i-imeyile Cwangcisa uLawulo lokuLanda kwileyibhile ye-Gmail ukwenza i-GrexIyitsale kuzo zonke iincoko ze-imeyile ezineleyibhile.
Imigaqo yokufikelela -Ukulawulwa kokufikelela okuhle kwe-imeyile kwi-GrexIt ngokusebenzisa iithegi.
Ukubhengezwa: I-GrexIbonelele ngesiQhagamshelo sokuNxibelelana ngokwesiko ukulandelela nakuphi na ukubhalisa kwesi sithuba.
tags: Isiseko solwazi lwe-imeyileiGoogle appsImeyile kaGoogleGoogle +mzobo